चर्चित पोर्न वेबसाइटबाट ९० लाख पोर्न भिडियो डिलिट ! - Malayakhabar
होम पेज फिचर चर्चित पोर्न वेबसाइटबाट ९० लाख पोर्न भिडियो डिलिट !
काठमाडौं := चर्चित पोर्न वेबसाइट पोर्नहबले आफ्नो साइटबाट दशौं लाख भिडियो हटाएको छ । वेबसाइटमा भेरिफाइड नभएका प्रयोगकर्ताले अपलोड गरेका भिडियोहरु हटाइएको हो । द गार्डियनका अनुसार सोमबार यो क्यानेडियन वेबसाइटमा भिडियोको संख्या ४० लाखमा झरेको छ । यसअघि साइटमा भिडियोको संख्या १ करोड ३० लाख थियो ।
अघिल्लो लेख उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको फैसला उल्टायो, सांंसद रेशमसंगै लक्ष्मणलाई पनि जन्मकैद!
पछिल्लो लेख अव नेपाली श्रमिकहरुले अनलाइनबाट नै पुनः श्रम स्वीकृति लिन सकिने।